चीन,पाकिस्तान र तालिबानबीच रहस्यमय सम्बन्ध — Imandarmedia.com
चीन,पाकिस्तान र तालिबानबीच रहस्यमय सम्बन्ध
एजेन्सी। तालिबान कब्जापछि अफगानिस्तानमा दूतावासहरु अझै पनि सक्रिय रहेका केही देशहरुमा चीन र पाकिस्तान छन्।
एकातिर, अफगानिस्तानबाट हैरान र परेशान भएकाहरुको चिन्ताजनक तस्वीरहरु बाहिर आउँदैछन्। अर्कोतर्फ, तालिबानप्रति चीन र पाकिस्तानको नरम दृष्टिकोण पनि चर्चा को बिषय बनेको छ ।
चीन-पाकिस्तान र तालिबानबीचको यो ‘रोमान्स’ देखेर धेरै विशेषज्ञहरु आश्चर्यचकित छैनन्। केहीले यसलाई तालिबानको ठूलो ‘कूटनीतिक जीतको रुपमा लिएका छन्। विज्ञहरुका अनुसार चीन र तालिबानलाई कहीं न कहीं एक अर्काको आवश्यकता छ। एकै समयमा, पाकिस्तानलाई पनि।
पाकिस्तानमाथि विगतमा तालिबानलाई समर्थन गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यसो भए के अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जा चीन र पाकिस्तान को लागी राम्रो समाचार हो? के तालिबानबाट चीन र पाकिस्तानलाई कुनै सुरक्षा खतरा छैन ? अहिले सबैतिरबाट उठेको प्रश्न हो यो।
अफगानी महिलाहरुको भबिष्य अनिश्चित, तालिबानहरूद्वारा बुर्का लगाउन बाध्य, विद्यालय जानबाट वञ्चित
तालिबानको पहिलो २० वर्षे शासनकाल टाउको छिनाउने, ढुङ्गा हानेर हत्या गर्ने र बुर्का लगाउन बाध्य पार्ने सहितका महिला विरूद्धका क्रूरता प्रकट भएका थिए।
लडाकुहरू सत्ताबाट बाहिर गएपछि अफगानिस्तानका महिलाहरूले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्ने क्रममा कतिपय मन्त्री, नगरप्रमुख, न्यायाधीश र प्रहरी अधिकृत बने। तर, अहिले उनीहरूको भावी बाटो अनिश्चित बनेको छ।
तालिबानहरूले महिला अधिकारबारे भन्ने र व्यवहारमा देखाउने कुरा फरक रहको अफगान शिक्षिका र अधिकारवादी पास्ताना दुर्रानी बताउँछिन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले विगतमा महिलालाई बुर्का लगाउन बाध्य पारेको र १० वर्षभन्दा माथिको उमेरका छात्रालाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गरेको उक्त इस्लामवादी समूहले महिला अधिकारका बारेमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने बताइन्। दुरानीले जीवनको जोखिम रहेपनि आफूले बोल्नुपर्ने बताइन्।
‘हेरतमा किशोरीहरूले विश्वविद्यालय जान पाएनन्। कान्दाहारका छात्राहरूलाई घर जान भनियो र उनीहरूका पुरुष आफन्तलाई उनको ठाउँमा ब्याङ्कमा काम गर्न भनियो।’
उनले थपिन्, ‘तालिबानहरूले विभिन्न देशहरूबाट अफगानिस्तानको मान्यताप्राप्त सत्ताको वैधानिकता खोजी रहेका छन् तर त्यही समयमा उनीहरूले व्यवहारमा के गरिरहेका छन्? या आफ्नो तल्लो तहमा उनीहरूको नियन्त्रण छैन या उनीहरू वैधानिकता चाहन्छन् तर काम गर्न चाहँदैनन्। यो दुई फरक कुरा हो।’
महिला अधिकारको अर्थ हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार, समाजमा घुलमिल हुन पाउने अधिकार, राजनीतिक अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार वा मतदानको अधिकार के हो त्यो प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसै गरि , अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभानले काबुल विमानस्थलमा आक्रमण भएपछि अब अफगानिस्तानमा हमला जारी राख्ने बताएका छन्। उनले आइतबार सीबीएस न्यूजलाई भने,
‘राष्ट्रपति अफगानिस्तानमा नयाँ युद्ध सुरु गर्न चाहँदैनन्। तर हामी हाम्रा सैनिकहरुमाथि हमला गर्नेहरुसँग लड्नका लागि के सहयोग चाहिन्छ भनेर हाम्रा कमाण्डरहरुसँग कुरा गर्नेछौं। अमेरिका यसबाट आईएसआईएस–के (इस्लामिक स्टेट खोरासन)लाई नष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ।’
‘यसकारण हामी उनीहरुको पछि लाग्नेछौं र हामीले सप्ताहन्तमा जुन प्रकारको अभियान (हमला) चलाएको छौं त्यसलाई निरन्तरता दिनेछौं। हामी उनीहरुलाई युद्धको मैदानबाट सखाप पार्ने अर्को योजनाको बारेमा पनि सोच्नेछौं,’ उनले थपे।
सुलिभानले कुनै पनि प्रकारको आक्रमणको सम्भावित खतरा टार्नका लागि आफूहरु निकै नजिक पुगेको पनि बताएका छन्। ‘अफगानिस्तानमा रहेका आतंकवादी संगठनहरुमा त्यहाँबाट बाहिर कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्ने हाम्रो खुफिया विभागको अनुमान छ। तर उनीहरुले यो क्षमताको विकास गर्न सक्नेमा हामी सजक छौं,’ उनले भने।
यसअघि अमेरिकी अधिकारीहरुले आइतबार काबुल विमानस्थलमा आत्मघाती बम विस्फोट गर्न जाँदै गरेका आतंकवादीलाई ड्रोन आक्रमण गरेको बताएका थिए। एक सैन्य अधिकारीले बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएसलाई भने, ‘हामीले टार्गेट गरेको व्यक्तिलाई मार्न सफल भएको विश्वास गरेका छौं। प्रारम्भिक रिपोर्टका अनुसार आक्रमणमा कुनै पनि नागरिक हताहत भएका छैनन्।’
‘कारमा भएको अर्को विस्फोटबाट त्यहाँ धेरै मात्रामा विस्फोटक पदार्थ थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ,’ सैन्य अधिकारीले भने। समाचार एजेन्सी एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार तालिबानले पनि एक आत्मघाती हमलाकारी अमेरिकी हवाई हमलाको शिकार भएको जानकारी दिएको छ।
यो खबर विमानस्थल नजिकै भएको रकेट हमलापछि बाहिर आएको हो। यद्यपि यी दुई घटनाहरु एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् वा छैनन् भन्ने अझै पुष्टि भएको छैन। बिहीबार काबुल विमानस्थलमा आक्रमण भएको थियो जसमा १७० जना मारिएका थिए। जसमध्ये १३ जना अमेरिकी सैनिक अधिकारी थिए। यस हमलाको जिम्मेवारी आइएसआईएस कश्मीरले लिएको थियो।